दरबारहत्या काण्ड जिबीत साक्षी – हिमानी शाहको बयान यस्तो छ ! बन्दुक आफु तिर तेर्स्याएर गोलि हान्न लागेको त्यो क्षण सम्झदै यसो भनिन् (भिडियोसहित) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
Published :2June, 2018 4:06 pm
काठमाडौ – दरबार हत्याकाण्ड भएको आज १६ वर्ष पूरा भएको छ। भनिन्छ– दरबार हत्याकाण्डमा षड्यन्त्र भएको छ। तर, त्यो षड्यन्त्र कसले गर्यो ? कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन। दर्जनौंपटक सरकार परिवर्तन भयो तर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आँट कुनै सरकारले गरेन। नेपाली जनताले सधैं भन्ने गरेका छन्– ‘राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको हत्याकाण्ड पत्ता लगाइयोस्।’ त्यति मात्रै होइन नारायणहिटी संग्रहालय घुम्न आउने अधिकांश दर्शकले लेख्ने गरेका छन्– ‘दरबार हत्याकाण्डको छानविन होस्।’